Ongororo na _Bull Mountain_. Iko kukuru kutanga kwaBrian Panowich | Zvazvino Zvinyorwa
Ongororo na _Bull Mountain_. Iyo huru kutanga kwaBrian Panowich
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nhema nhema
Kwave kuriwo kutanga kwangu mune inonzi izvozvi nyika noir, kana iyo nhema nhema yenharaunda yekumaruwa. Zvave zvichinakidza uye izvi Bull Gomo (2015) kubva Brian panowich yawa (ichiedza nesimba kuti isaramba ichienderera) mazuva mashanu. Chokwadi, paive nechidiki asi chakakosha chirevo kubva kune mumwe James Ellroy, ane nyanzvi yekunyora yakafanana neyaPanowich. Asi zvakare nyaya yacho yainzwika kuva yakanaka uye ini ndaida kupinda mune ino subgenre. Izvo hazvina kundiregedza zvachose. Handei naye.
1 Brian Panowich ndiani?
2 Bull Gomo
3 Nei uchiverenga
Brian Panowich ndiani?
Zvakanaka mudzimi wemoto anobva kuGeorgia, akazvarwa muna 1972, kwaanogara nemukadzi wake nevana vana. Bull Gomo zvakaita kuti akunde iyo Yepasi Pese Thriller Vanyori Mubairo 2016 yeyakanakisa yekutanga novel uye iyo Pat Conroy Mubairo yeiyo yakanakisa nyaya yekuparwa kwemhosva.
ari Burroughs yakagara ichigara muBull Mountain, North Georgia, ichiita whiskey yekumba, mbanje, methamphetamine nepfuti.. Nerimwe zuva Clayton burroughs, kure navo uye kushanduka kuva SHERIFF, anoshanyirwa ne Simon holly, inoshanda chaizvo uye, pakuonekwa, yakavimbika mubatanidzwa. Izvi zvinokupa iwe nehurongwa hukuru hwe kupedza mabasa ese asiri pamutemo mumatunhu matanhatu. Asi izvo zvinoitika nekuti Clayton anofanirwa kuyananisa nehama yega uye ine njodzi kwazvo yaakasiya..
Ndiwo mazwi epamutemo, asi iyo chaiyo iratidziro ye 26 zvitsauko izvo taura nyaya kubva muna 1949 kusvika 2015. Iyo nyaya yeiyo Burroughs, ine mhuri yemhuri yakazara ne mhuka kune imwe neimwe yakaipa uye uko gwai dema ratove mune irori: nhengo yekupedzisira mumiririri akatendeka uye anehunhu wemutemo, asi asingaregi kuve neropa rake rechisimba.
Zvisinei, Clayton Burroughs haasi iye protagonist mukuru. Mukufamba kwenguva tinowona mashandiro ehumambo hwematsotsi uye kuti hupenyu hwenhengo dzese dzemhuri hwanga hwakamira sei. Kubva kuna Kaini naAbheri vaive sekuru vake nasekuru-sekuru, Cooper naRye Burroughs, tupuka twuya twakava baba vake, Gareth, uye nevana vatatu vaanavo uye vanobhadhara mhedzisiro yeropa rakaipa kudaro.
Poshi, Buckley, iwe wakabhadhara kare. Mukuru, Halford, ndiyo yakaipisisa. Uye Clayton, mudiki, uyo kunyangwe nebasa rake rakanaka sheriff uye kutsunga kwake kugara akanyarara muwanano yake, achave nazvo zvakanyanya kuoma nekushanya ikoko kubva kuna Agent Holly Uye kuti zvese zvinogona kugadzirirwa zvirinani, asi pasi, ropa uye kutsiva kwakanyanya.
Unongofanira kutanga nemutsara uyu kubva Julius Caesar kujekesa uko kupfura kuri kuenda (uye hazvina kumbotaurwa zvirinani):
Nebakatwa rakavhomorwa, usarega chero pfungwa yerudo, tsitsi, kunyangwe nechiso chevabereki vako, ichikufambisa..
Uye saka zviri munhoroondo yese. Hapana chinofambisa iwo anoshoreka iwo mabhureki ayo ari maBurroughs, mutsika mufananidzo weakaipisisa "marara machena" mumidzi yakadzika yeAmerica uye ine mhirizhonga. Y Panowich haisi skimp pamutauro wakashata uye wakaomarara kurondedzera kana kutsanangura mamiriro nenzvimbo. Kana pakuratidzira iwo mavara musina kusimba uye nesimba, senge mhirizhonga yavanowanda mukati mayo zvese.
Izvo zvinomirawo pachena vatatu vevanhukadzi, vane maonero uye zvisarudzo zvavanoita uye vanotambura zvese nemarwadzo uye nemweya wekurwa, kunyangwe ivo vachiziva kuti mhirizhonga iyi iri pamusoro uye pakupedzisira inovavhima neimwe nzira.
Kupedza, uye ndiani akaverenga LA Chakavanzika de Ellroy pamwe tsvaga kumwe kufanana mukupedzisira. Ini ndakangozviwana. Uye ndakanzwa zvakafanana ... Ahem, ndinofanira kunyarara.
Ah, chimwe chinhu chandisina kukwanisa kudzivisa uye icho chiri chinyararire kune vateveri ve Stranger zvinhu. Chiso cheiyo Clayton Burroughs chinogona kunyatso kuve icho cheiyo David Harbor huru, iye futi SHERIFF Chief Hooper kubva kune yakarova TV nhepfenyuro.
Zvisinei, chinyorwa chikuru chematsotsi kutanga May inopisa kare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Ongororo na _Bull Mountain_. Iyo huru kutanga kwaBrian Panowich
Makorokoto kumunyori mutsva, mamuburitsa munhandare.
manzwiro kubva kune peji rekutanga kusvika kune rekupedzisira pasina kukanganiswa, hurukuro huru, inonakidza zano, yakanakisa mamiriro, mavara,….
apo muridzi wemoto anoenderera kuti tigone kuwana Grisham nyowani, nenzira yake yakajeka, saElmore Leonard - Raylan
Ndinoda kutsvaga mamwe manyorerwo enyika ino noir maitiro kana zvakafanana
Pindura kuna josepa
Chinhu chakareruka sekuva newe
Tsamba 'M' yeRAE inoramba isina munhu